पारस शाह किन दुब्लाए ? मन्दिरमा बिहेको रौनक झै पुगेका पारसलाई देखेर सबै छक्क (भिडियो) - Enepalese.com
पारस शाह किन दुब्लाए ? मन्दिरमा बिहेको रौनक झै पुगेका पारसलाई देखेर सबै छक्क (भिडियो)
इनेप्लिज २०७४ फागुन १५ गते १२:२९ मा प्रकाशित
पूर्व युवराज पारस शाहलाई बिहानै काठमाडौंको टेकुमा रहेको पचली भैरवमा देख्नेहरु छक्क परे । उनलाई देखेर भन्दा पनि उनको शरिर देखेर छक्क परेका हुन् । मोटाघाटा पारस दुब्लाएर चिन्न नसक्ने जस्तो देखिएका थिए । टोपी र दौरा सुरुवालसहितको पहिरनमा उहाले पचली भैरवमा पूजा गर्नुभएको हो । काठमाडौं १२ वडाका राष्ट्रवादी समूहको आयोजनामा पारसलाई टेकुमा रहेको पचली भैरवमा पूजाका लागि निमन्त्रणा गरिएको थियो । बिहान ११ बजेपछि आएका पारसलाई मन्दिर परिसरमा रातो कार्पेट बिछ्याई, पन्चेबाजा बजाई स्वागत गरिएको थियो। । उहाका समर्थकहरुले पारस आऊ देश बचाऊको नारा लगाएका थिए । समर्थकहरुले राजदण्ड र पारसको फोटोसहितको ब्याच बनाएर बाँडेका थिए । यसअघि माघ १६ गते पारस शाह पशुपति मन्दिरमा पूजाआजाका लागि गएका थिए ।